Amaphupho ngokuhamba – iAfrika
Asho ukuthini amaphupho ngokuhamba? Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahhashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo.
Amaphupho ngokuhamba ngezinyawo
Uma uphupha ukuthi uhamba ngezinyawo kujwayele ukuba uphawu olubi. Kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezinzima empilweni yakho nosizi ebudlelwaneni bakho nabanye ikakhulukazi uma ungcolile ephusheni lakho. Amaphupho ngezinyawo.
Tags Izinyawo, Ukuhamba
Uma uphupha ukuthi unohambo ngesitimela uzohlangana nomuntu okade wagcina ukumbona.
Uma uphupha ukuthi ugibele itekisi uzogula kakhulu maduzane. Uma usulikhokhelile itekisi bese liyakushiya kukhona oseduzane nawe okungenzeka adinge usizo maduzane.
Uma uphupha ukuthi uhamba emkhunjini kusho ukuthi uzophumelela futhi ubone umhlaba. Uma ubona ihange kusho ukuthi kunethemba ezinkingeni onazo. Uma umkhumbi ucwila kusho ukuthi uzoba nebhadi.
Amaphupho ngesikebhe sokugwedla
Uma uphupha ukuthi uyagwedla esikebheni emanzini kuwuphawu lenhlanhla uma nje isikebhe singacwili.
Uma uphupha ukuthi ubona umgwaqo kunempumelelo ekusaseni lakho. Uma uphupha ngebhodi lasemgwaqeni maduzane nje uzothola iseluleko esihle okufanele usilalele.
Uma uphupha ukuthi uhamba ezindleleni zasendle kusho ukuthi uzoba nempilo futhi uzophila isikhathi eside. Kepha uma ulahleka noma uhamba ngapha nangapha uzoba nebhadi.
Uma uphupha ukuthi ubheka imephu kusho ukuthi uzohamba kude.
Uma uphupha ukuthi usemotweni futhi kukhona ogijimayo ngemoto kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo. Kepha uma kunguwena oshayelayo uzolahlekelwa yimali maduzane.
Uma uphupha ukuthi usesikebheni futhi amanzi amile kusho ukuthi uzojabula uthuthuke. Uma amanzi egubha kusho ukuthi kunebhadi elizayo.
Uma uphupha ukuthi uhamba ngebhayisekili kuwuphawu oluhle lwesimilo sakho. Kusho ukuthi uzokwenza izinqumo ezilungile ukuze uphumelele empilweni.
Uma uphupha uhamba ngebhanoyi kusho ukuthi uzoya kude empilweni, kodwa uma lishayisa lokho kusho ukuthi uzobhekana nobunzima obuningi nosizi. Uma uphupha uphakathi ebhanoyini lihamba kahle nje, lokho kusho impumelelo. Uma uphupha uphakathi ebhanoyini kodwa bese liwa, lokho kusho izinkinga ozohlangabezana nazo empilweni Uma uphupha ubona ibhanoyi liwa, wena ungekho phakathi, lokho kusho ukuphoxeka okuzoba khona … Read more
Uma uphupha ukuthi ugibele inqola (ikalishi, ingqukumbane) kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma uphupha uyidonsa inqola. Uma uphuphe uyigibela inqola lokho kubika ukushona phansi empilweni, okuba ukwehla ezingeni obukulo. Kungaba ukwehla esikhundleni esiphezulu obukuso ngokomsebenzi, ukuphatha noma ngokwendima oyidlalayo kulokho okwenzayo futhi onothando lwakho. … Read more
Tags Amakalishi, Izingqukumbane, Izinqola